Walxo aan la aqoonsan oo diyaardi kusoo riday soohdinta Soomaaliya iyo Itoobiya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Diyaarad aan la garan cidda iska leh ayaa walxo aan la aqoonsan kusoo riday duleedka magaaladda Balli Cabanne oo magaaladda Hargeysa kaga beegan dhinaca koonfur galbeed.
Sida dadka deegaanku sheegeen, walxahan ayaa ku soo dhacay meel 5 killo mitir ka xigta galbeedka magaaladda Balli Cabanne, taasina waxay dadkii ku abuurtay cabsi iyo welwel maadama oo aanay aqoonsan waxa uu yahay.
“Maalmo ka hor ayey diyaaraddi ka timid dhinaca koonfurta waxaanay hawada ku qar-xisay walax dhawaaqeedda meelo durugsan laga maqlayey, waxaana dhulkii ku soo daadisey walxo yaryar markiiba waxa yimid gudoomiyaha degmadda iyo gudoomiyaha gobolka Hawd waxaana alaabtii intay qaar ururiyeen la tageen dhinaca Hargeysa”ayuu yidhi goob-jooga ku sugnaa magaaladda Balli cabanne.
Guddoomiyaha degmadda Balli Cabanno oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa ka gaabsaday inuu arrintaasi faaf-faahin ka bixiyo, isagoo xusay in aanu awood u lahayn inuu ka hadlo, balse ii xaqiijiyey inay walxahaasi jiraan oo dawladdu baadhitaankeedda ku daba jirto.
Badhasaabka gobolka Hawd iyo gudoomiyaha degmadda Balli Cabane ayaa iyagu maalmahan u joogay magaaladda Hargeysa inay ku soo wargaliyaan walaxdan qaraxday ee diyaaraddu ku soo tuurtay deegaankoodda.
Magaaladda Balli Cabane ayaa ku taala meel u dhow xuduudda maamulka Somaliland iyo Itoobiya wadaagaan.
Saddex ka mid ah saraakiisha taliska Nabad Sugidda Soomaaliya oo xilalka laga qaaday